အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ကျွန်တော်နှင့် လမ်းများ
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:42 AM
ဟုတ်ပါတယ် ကိုယ်လဲလျှောက်နေဆဲပါပဲ ဒါပေမယ့် အလှမ်းဝေး လှတယ်ကွာ ဘယ်တော့ ဆုံးမလဲ မသိဘူး...။
တခါတရံမှာ ကံ၊ တခါတရံမှာ ကတ္တားအဖြစ် လျှောက်ဖြစ်သွားကြတာပဲ...
ဟုတ်တယ်သယ်ရင်းရေ...လမ်းခရီးတစ်ခုရဲ့ အဆုံးမှာ အခြားသောခရီးတစ်ခု၏အစသည် အမြဲတည်ရှိနေတတ်တယ်ကွ...း)
လမ်းတွေက အများကြီးပဲ ... သံသရာ ခရီးလမ်းက တော့ အရှည်ဆုံးပေါ့ :)
လမ်းတွေကတော့ အများကြီးပေါ့ လူတိုင်းကတော့ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ လမ်းက မှန်တယ်ထင်ကြမှာပဲလေ ။ အဆုံးတစ်ခုပြီးရင် အစ တစ်ခုကိုကျနော်တို့ တွေ့ ရမှာပါပဲ အဲ့စားသားလေးကို သဘောကျတယ်အစ်ကိုရေ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်လျှောက်ရမှာပဲလေ လမ်းဆိုမှတော့ လျှောက်ဖို့ ပေါ့ တစ်ခါခါတော့ လမ်းတွေက ဝေးလွန်းတယ်ထင်တယ် လျှောက်ရတာ ပင်ပန်းလာပြီး........။
လမ်းခရီးများ အဆုံးထိမရောက်ခင် အဝေး ကအိမ်ငယ်လေး လဲ ပြို ပြီ ။ ။
လမ်း လျှောက်ရင်း လမ်းပျောက်နေဆဲ.....
လမ်းဆိုတာတော့ အများကြီးပဲဟေ့ ဘယ်သူလျှောက်လျှောက် လမ်းဆိုတာအများလျှောက်ဖို့၊
အဲဒီလမ်းအများလျှောက်ဖို့ကို နှလုံးသွေးနဲ့ရင်းပြီး ခင်းပေးသူတွေရှိသလို၊ ဗလအားကိုးနဲ့ မိုက်ကြေးခွဲ ဖြတ်သန်းခကောက်စားနေသူတွေ ရှိတယ်။
မင်းကော၊ ငါပါ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲ??????????????
သူငယ်ချင်း.. အတွေးလေးတွေ ကောင်းတယ်ကွာ.. အားပေးတယ်.. လမ်းဆိုတာ လျှောက်နေရင်းနဲ့ ပျောက်ပျောက်သွားတတ်တာ ခက်သကွ.. မျက်စိလည်တဲ့ အချိန်မှာ ပြန်မတည့်နိုင်ရင်တော့.. လမ်းဆုံးတိုင်မရောက်သည့်အပြင် လမ်းမှားပါရောက်တတ် တယ်ကွ... အသိလေးပေးတာကျေးဇူးပါကွာ..
သယ်ရင်းရေ အတွေးအခေါ်တွေက ဂွတ်လှချည်ာလား ။
လမ်းတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့ အတွေးလေး အရမ်းကောင်းပါတယ်။ “လမ်းခရီးတစ်ခုရဲ့ အဆုံးတွင် အခြားသောခရီးတစ်ခု၏အစသည် အမြဲတည်ရှိနေတတ်ပါသည်” ဆိုတာလေးကို အရမ်းသဘောကျမိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်လေ... တစ်လမ်းပြီးတစ်လမ်း မဆုံးနိုင်အောင် လျှောက်နေကြရတာ။ တခါတလေ ခြေကုန်လက်ပန်းကျလိုက် တခါတလေ အားတွေတက်လိုက်နဲ့။ ဘာပဲပြောပြော မောတော့မောတာပါပဲ...
BUT DIFFERENT DIRECTIONS, PATHS AND DESTINIES........
SO MUCH WAYS THAT WE CROSS ONE ANOTHER,
AND THAT'S HOW WE MEET
SOMEHOW WE WILL GO ASTRAY FROM IT,
CAN YOU DENY THAT????
EXCEPT THOSE GOOD OLD TIMES, CAPTURED IN OUR HEART, THAT WILL NEVER DIE !!!